Indawo Yokuhlala e-Kazungula, e-Bigeria - I-Airbnb
Indawo Yokuhlala e-Kazungula, e-Bigeria
Chobe, Southern, iBotswana
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Boammaruri
Indawo Yokuhlala yase-Kazungula yikhaya likanokusho lomndeni elinamakamelo okulala angu-4 elitholakala endaweni ethulile, ephephile futhi ekhethekile yase-Kazungula e-Chobe, e-Bigerani. Ake sihlele imisebenzi yakho yokuvakasha ngenkathi uphumula kuvulandi futhi ubuke izindlovu zihambahamba, zijabulele izinhlobo ezingu-100+ zezinyoni engadini, noma uphumule echibini futhi upheke isivunguvungu kuhhavini we-bbq noma umlilo we-pizza wezinkuni. Kutholakala emakhilomitheni angu-10 ukusuka e-Chobe National Park namakhilomitha angu-60 ukusuka e-Vic Falls, asikho isisekelo esingcono sokubona isifunda.
Ikhaya leholide le-Location Kazungula liyingqayizivele futhi liyimfihlo kakhulu. Uqinisekile ukuthi yonke indawo izoba ngeyakho wedwa. Ebusuku, zizwe ukhululekile ukungena engadini futhi ubuke izinkanyezi ezikhanyayo noma izimpukane zomlilo ezimangalisayo! noma zama inhlanhla yakho usuka ebhalikhoni lapho sibone khona ama-hippos, izingane zezihlahla nabantu abangabazi.(ebusuku) Labo abathanda izinyoni, lena yipharadesi lezinyoni!
4.59 · 18 okushiwo abanye
Indawo ezungeze idolobha elikhulu ithule futhi iyibhasi, inezilwane zasendle eziningi, ikakhulukazi izinyoni. Izivakashi kufanele zibe nobumfihlo obuthile.
Akukho ukuxhumana okuningi nezinye izivakashi. Endaweni yokuhlala yase-Kazungula, singathanda ukuthi izivakashi zethu zizizwe zikhululekile futhi zijabulele ukuba zodwa. Umbungazi/umuntu ohlanzayo angase avele kanye ngosuku ukuze aqoqe udoti. Inombolo yombungazi iyatholakala ukushaya ucingo noma nini.
Akukho ukuxhumana okuningi nezinye izivakashi. Endaweni yokuhlala yase-Kazungula, singathanda ukuthi izivakashi zethu zizizwe zikhululekile futhi zijabulele ukuba zodwa. Umbungazi/…